Pfungwa | Ndivanaani vanobatsirwa nezvikwereti zvako zvekurapa zvinokuvadza? - New York Times - Techip RELAY
Pfungwa | Ndivanaani vanobatsirwa nezvikwereti zvako zvekurapa zvinokuvadza? - New York Times
Saka nhasi, chipatara chako, chiremba wako pamwe neinishuwarenzi yako - vese vanoti vanogadzirisa kuchengetedza hutano hwako - vanowanzove mumakwikwi matatu emari yako.
Sezvo kurwira kwemari kuri kuwedzera, rimwe nerimwe divi rakawedzera zvombo zvitsva kutora zvimwe: zvipatara zvakawedzera mutengo wekukwira uye mutengo wekubatanidza. Inishuwarenzi vakaona yakawedzera kuwedzera kubhadhara-uye kubhadhara. Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti, ivo vanoisa vashoma network kune avo vaizogamuchira mitengo iyo yavaida kubhadhara.
Inoshamisa mavoicevo ndiyo yekupedzisira zano: apo vashandisi vakasarudza kuti inshuwarheni yekubhadhara kupihwa kupi yaive yakanyanya kupetwa, vakarega kutora chikamu munishuwarenzi network; vangave vakasiya kana weinishuwarenzi akavasiya padivi. Mune zvimwe zviitiko, vanachiremba vakasarudza kusatora mukana mune chero network. Nenzira iyoyo vaigona kubhadhara zvavaida pavakanga vaine chekuita nekutarisira varwere uye kubhadharisa murwere zvakananga. Ivo vanishuwarenzi, kune rumwe rutivi, havana hanya chaizvo kana varapi vakakumbira mari yakawanda vakasara.
Uye, kwechinguva, mapato ese ainyatso kubvumirana neiyi gadziriro.
Asi sezvo kusvika uye huwandu hwekushamisika mabhiri hwakawedzera mumakore mashanu apfuura, vanhu vazhinji zvikuru vakaona zviitiko zvinodhura uye zvisingafadzi. Nekuunganidzwa kweruzhinji rwekushata, zvazove zvisingabviri kuzviteerera. Zvanga zvakanetsa kuchengetedza murwere akaomerera aine anopfuura madhora zviuru zvishanu mukushamisika mabhiri e Vhiki 14 dze dialysis. Kana iyo madhora zviuru gumi zvemadhora kubva kuna chiremba wezvechiremba kunze kwetiweki anotarisira vana vachangozvarwa mukuchengetwa kwakanyanya. Zvakadiniko nezvematunhu asina kambani yeambulensi ine inishuwarenzi, saka rwendo rwese rweambulensi runodhura mazana kana kunyange zviuru zvemadhora?
Aya maitiro ndeyekuvheneka kuri pachena. Asi hapana munhu mune yehutano chengetedzo anoda unilaterally kugadzira iyo mhando hombe concepts inozochinja ivo. Inishuwarenzi vanoda kubhadhara chiyero chakatemwa. Vanachiremba nezvipatara vanofarira izvo zvavanodaidzira kuti "baseball Type arbitration", uko kune rairo yakakwana inotarwa nekurevererana. Mativi ese ari maviri akaganza vezvematongerwo enyika vanonzwira tsitsi maonero avo.
Saka hapana chakachinja padanho remubatanidzwa, kunyangwe hazvo zvakaoma kufungidzira imwe nyaya pane iyo kubvumirana kwakadaro. Makumi maviri nematatu evaAmerican vanoti vari kunetsekana nekukwanisa kubhadhara mari yekurapa isingatarisirwe - zvakanyanya kudarika kumwe kuripwa kwemumba. Vanoda kusvika vasere pagumi vekuAmerica vanoti vanoda mutemo wemubatanidzwa kuchengetedza varwere kubva kushamisika mabhiri.
Nyika dzinotora yavo yekushamisika mitemo yekubhadhara, kunyangwe ivo vachishaya simba nekuti yakawanda yeinishuwarenzi inodzorwa murudzi.
TELES RELAY 21714 Posts 0 mashoko
Moroko: Kufanotaura kwemamiriro ekunze kusvika makumi matatu nematanhatu nhasi muMorocco